Jen Saadiq Joon war ka soo saaray xiisaha Dagaalka ee Caawa | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Jen Saadiq Joon war ka soo saaray xiisaha Dagaalka ee Caawa
Waxaan caawa dib ugu laabtay shiirkole oo ah fariisinkayga rasmiga ah. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u cadaynayaa in aan anigu cidna duulaan ku ahayn balse cidii soo weerar tagtaa la iska dhicin doono.
Waxaan u mahad celinayaa xildhibaanadayda iyo saraakiisha kala duwan ee ciidanka ee sida dhiiranaanta iyo geesinimada leh ii garab taagan iskana diiday awaamiirta sharci darada ah ee uu soo saaro taliska waqtigiiisu dhamaaday.
Xukun jecli iyo kali talis dhibka aan ka dhaxalnay waa midka 30 sano jirsaday ee ilaa maanta saamayntiisu ay taagan tahay adaxwaynihii hore Farmaajo waxaan ugu baaqi lahaa inuu dalkaan dib u dhac iyo burbur u horseedin.
Sadaq Omar Hassan -Sadaq John
Previous articleXildhibaan Mahad Salaad “Xildhibaanada habargidir ayaa hada soo gaaray oo aan ka mid ahay xaafada shirkole..
Next articleXildhibaano u hiiliyey Caawa Taliye Saadiq Joon caawana la hooyanaayo Shirkoole
Muqdisho, Febraayo 06-2021: Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal (GHDHF), wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay is afgaran waagii uu ku soo dhamaaday shirkii Samareeb,...